भिडियो वार्ता : कोरोना संक्रमणको ‘हटस्पट’ नेपालगञ्जमा कसरी हुँदैछ उपचार? :: स्वास्थ्य खबरपत्रिका
भिडियो वार्ता : कोरोना संक्रमणको ‘हटस्पट’ नेपालगञ्जमा कसरी हुँदैछ उपचार?
कल्पना पौडेल आईतबार, वैशाख ५, २०७८, २०:०३:००
नेपालगञ्ज- बाँके जिल्ला पुनः कोरोना संक्रमणको ‘हटस्पट’ बन्दै गएको छ। जिल्लामा सक्रिय संक्रमितको संख्या बढ्दै गएपछि भेरी अस्पतालका शय्या भरिन थालेको छ।
भेरी अस्पतालमा कोरोना संक्रमितका लागि हाल १४२ क्षमताको शय्या व्यवस्थापन गरिएको छ। ती मध्ये १०२ शय्या आइसोलेसन र ४० शय्या शंकास्पद बिरामीलाई राख्ने गरिएको छ। यस्तै १५ शय्याको कोभिड आइसियु बेड रहेको छ।
यही सेरोफेरोमा भेरी अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा प्रकाश थापासँग स्वास्थ्यखबरकी कल्पना पौडेलले भिडियो कुराकानी गरेकी छिन्।
आज भुटानबाट ३ लाख डोज एस्ट्राजेनेका खोप नेपाल आउँदै ४० मिनेट पहिले